‘जेलमा हुनुपर्ने मान्छे’ शिवम् सिमेन्टको मालिक : ३ वर्षदेखि फौजदारी मुद्दा अलपत्र ! | Diyopost
‘जेलमा हुनुपर्ने मान्छे’ शिवम् सिमेन्टको मालिक : ३ वर्षदेखि फौजदारी मुद्दा अलपत्र !
काठमाडौं । यदि मुलुकमा कानुनी शासन हुन्थ्यो भने धेरै ठूला बडा र माफियाहरु जेलको चिसो हावा खाइरहेका हुन्थे । अदालत भित्र हुने भ्रष्टाचार र माफियाहरुको चलखेलका कारण उनीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
साना र पहुँच नभएका कयौँ निर्दोष नागरिक भने देशभरका विभिन्न कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
त्यसैले नेपालमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान चर्चित छ ।
ठीक त्यस्तै राजधानीको अनामनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको सिवम् सिमेन्ट प्रा.लीका मालिकको एउटा फौजदारी मुद्दा अदालत भित्रै अलपत्र परेको खुलेको छ ।
२०७४ साल कार्तिकमा पक्राउ परेका सिवम सिमेन्टका मालिक रघुनन्दन मारुमाथि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी उत्खनन् गरेको गम्भिर अभियोग लागेको थियो ।
स्वीकृत माइनिङ स्किममा उल्लेख भएका भोगाधिकार भन्दा ३ दशमलव ५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा चुनढुंगा निकालेको खुलेको थियो ।
तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार त्यतिबेला सिवम् सिमेन्टले १२ लाख ५३ हजार ५ सय ७९ दशमलव १२ क्युफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरेको थियो ।
तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतले वन नियमावली, २०५१ को अनुसुची ६ अनुसार प्रति क्युफिट ३ रुपैयाँका दरले ३७ लाख ६० हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ ३६ पैसा विगो मात्रै निर्धारण गरेको थियो ।
वन ऐन २०५१ को परिच्छेद ११ मा अपराध दण्ड सजाय अनुसार राष्ट्रि वन क्षेत्र गरिने अपराधको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
गैरकानुनी उत्खनन् सम्बन्धी वन ऐनको दफा ४९ को (छ) उल्लेखित कसुरलाई भने सरकारी वकिलले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
पक्राउ परेका मारु ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । तत्कालिन वन प्रमुखले पक्राउ परेको खबर समेत गुपचुप राखेरै सेटिङ मिलाएका थिए । मारुलाई छुटाउन उद्योगका साझेदारहरु बाहिरबाट चलखेलमा लागेका थिए ।
मोरङ व्यापार संघका तत्कालिन अध्यक्ष समेत रहेका पवन सारदा, शिवरतन शारडा, सुरेन्द्र गोयल र शतिस मोरले करोडौं रुपैयाँ बुझाएको आरोप थियो । अदालतमा पेश गर्दा नै मुद्दा कमजोर बनाएको त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो ।
बालुवाटार जग्गाकाण्डमा मुछिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको तत्कालिन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छदार मार्फत उनीहरुले सेटिङ मिलाएका थिए ।
पक्राउ पछि मारुलाई थुनामा समेत नराखी वन कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो ।
उनी हेटौंडाकै होटलमा बसेका थिए । त्यतिबेला मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष सारडाले प्रहरी, वनका कर्मचारी र अदालतलाई समेत पैसा चाहिएपछि उद्योगीलाई पक्राउ गरिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘डिजाइनमा पक्राउ गरिएको थियो, पैसा दिएपछि छाडिदिए,’ सारडाले त्यतिबेला भनेका थिए,‘पक्राउ पर्नु र छोड्नुको कारण थाहा भएन ।’
उनका यस्ता विवादास्पद भनाइले अदालतदेखि उच्च तहसम्म आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसो त हेटौंडामा रहेको उक्त उद्योगले अर्बौं रुपैयाँ विजुलीको पैसा समेत तिरेको छैन । पैसा नतिरेपछि उच्च तहको मिलेमतोमा विद्युत आपूर्ति भने रोखिएको छैन ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा रहेको उनको मुद्दा फैसला हुनबाट शक्ति केन्द्रको सेटिङमा रोकिएको स्रोत बताउँछ ।